IMaritzburg isikulungele ukuphakamisa eyeNedbank | Isolezwe
IMaritzburg isikulungele ukuphakamisa eyeNedbank
ezemidlalo / 16 May 2018, 5:21pm / LUNGILE MAJOKA
USIYANDA Xulu weMaritzburg United uzohola abadlali abasebancane uma sebebhekene neFree State Stars emdlalweni wamanqamu weNedbank Cup eCape Town Stadium, eKapa, ngoMgqibelo
ISITOBHA seMaritzburg United, uSiyanda “Magazi” Xulu, sifuna ukupholisa isilonda sokungawini kweyamanqamu esidlale kuyona izikhawu ezintathu eNingizimu Afrika.
I-United izodudulana neFree State Stars kowamanqamu weNedbank Cup ngoMgqibelo, ngo-7 ebusuku eCape Town Stadium, eKapa. Ozowina umqhudelwano uzothola isheke lika-R7 million nethuba lokudlala kwiCAF Confederation Cup ngonyaka ozayo.
UXulu (26), ubekhona kowamanqamu iMamelodi Sundowns ihlulwa yiSuperSport United ngo 2-0 ngo-2012. Lo mdlali uphinde wezwa usizi lokuphuthwa yisicoco iKaizer Chiefs ithelwa phansi yi-Ajax Cape Town ngo 1-0 kowamanqamu weMTN 8 ngo-2015.
Ngonyaka ofanayo Amakhosi agilwa yiqembu likaXulu lakudala, iSundowns ibahlula ngo 3-1 kwiTelkom Knockout eMoses Mabhida Stadium, eThekwini.
Yize engenayo inhlanhla yokunqoba eNingizimu Afrika kodwa ngo-2013/2014, uMagazi wadla isicoco seRussian Cup neFC Rostov ayeyidlalela.
Lesi sipiliyoni sokudlala kweyamanqamu yisona esimphushayo ukuthi kulokhu ahole ozakwabo enkundleni ukuze babuyele eMphithi nendebe.
“Bekuyiqatha (ukuhlulwa kweyamanqamu) elinzima ukuligwinya. Angifuni ukuphinde ngibhekane nalesi simo. Uma ngibheka izinto esizenzile kule sizini ngiyakholwa wukuthi sizokwazi ukumelana nomdlalo wamanqamu. Okusemqoka ukuthi siqhubeke nokusebenza ngokuzimisela, sibambisane njengoba besenza isizini yonke.
“Lona umdlalo obalulekile kimina. Ngifuna ukwenza kahle kuwona, ngenzele neqembu. Akukho esizokushintsha. Esizobe sikwenza sizobe sikwenzela iqembu,” kusho uXulu.
I-Team of Choice kungokokuqala emlandweni wayo idlala kowamanqamu kanti iqede endaweni yesine kwi-log ye-Absa Premiership, okuyindawo ephezulu esike yayithola selokhu yaba khona.
“Ukunqoba indebe kuzoletha injabulo enkulu kithina. Yimina noBevan (Fransman) kuphela asebeke badlala kowamanqamu, ngakho kuzoba yinto enkulu ukuthi laba badlali banqobe isicoco sabo sokuqala besebancane. Mina ngibe nenhlanhla ngokuthi ngisheshe ngidlalele amaqembu amakhulu akuleli, ngaya naphesheya. Lokhu yikhona okungenza ngifane nensika eqenjini. Kuzoba semqoka ukuthi ngenze umsebenzi wokubalawula (enkundleni). Sesidinga indebe ukusonga isizini ebe yinhle kithina,” kusho uXulu.